iPhone 6s Plus ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း | Gadget သတင်း
Louis padilla | | မိုဘိုင်း, reviews
iPhone 6s နှင့် 6s Plus အသစ်များသည်စပိန်နှင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့သည် Apple စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုဆန်းစစ်ရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံချင်ကြပါ။ အထူးသဖြင့်အကြီးမားဆုံးသော iPhone 6s Plus သည် ၅.၅ လက်မအရွယ်မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှ phablets စျေးကွက်နှင့်ပိုမိုနီးစပ်လာသည်။
အနောက်ဘက်ရှိ 12 Mpx ကင်မရာ၊ ရှေ့ဖက်5Mpx၊ 3D Touch နှင့် FullHD မျက်နှာပြင်နှင့် Retina Flash အသစ် ဒီမျိုးဆက်သစ် iPhone အတွက်အရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုအချို့ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များအားသင်မြင်တွေ့နိုင်သည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုပေးပါမည်။
2 ပိုပြီးအာဏာ, တူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
4 Live ဓါတ်ပုံများ၊ မင်းရဲ့ဖမ်းယူမှုတွေကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပါ
5 3D Touch, iOS9ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပြောင်းလဲမှုတစ်ခု
6 အတွင်းပိုင်းရှိ iPhone အသစ်များ၊ အပြင်ဘက်တွင်အတူတူဖြစ်သည်
ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း Apple က၎င်း၏မျိုးဆက်« s »အတွင်းပြောင်းလဲမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ iPhone 6s ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကအနည်းဆုံး၊ အားဖြည့်အလူမီနီယံက၎င်းအားယခင်မျိုးဆက်ထက်အလေးချိန်ပိုမိုသည်၊ အထူးသဖြင့် ၂၀ ဂရမ်ပိုမို (20 ဂရမ်) နှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားသည် ၀.၁ မီလီမီတာတိုးပွားသည်။ သို့သော်ယခင်မော်ဒယ်များ၏အိမ်ရာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ 192s နှင့် 0,1s Plus များအတွက်သီးသန့် "rose gold" အရောင်သစ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အပြင် terminal ၏နောက်ဘက်ရှိ "S" ဖြင့်ယခင်မျိုးဆက်မှသာခွဲခြားနိုင်သည်။
iPhone 9s နှင့် 6s Plus ရှိ A6 ပရိုဆက်ဆာအသစ်များသည်အမှန်တကယ် "beasts" နှစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိ notebooks များထက်သာလွန်သည်။ ဒီကိုငါတို့ထပ်ထည့်ပါ RAM မှတ်ဥာဏ်သည် 2GB အထိရရှိသည် ရလဒ်မှာဤ terminal အသစ်နှစ်ခု၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်သူတို့ရင်ဆိုင်ရသည့်မည်သည့်အလုပ်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီများသည်စွမ်းဆောင်ရည်အရလျှော့ချထားသော်လည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမဟုတ်ပါ။ ပရိုဆက်ဆာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုသည် iPhone 6s နှင့် 6s Plus တို့၏ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်သူတို့အရင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ အက်ပလီကေးရှင်းက၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အာမခံထားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုအတည်ပြုသည်။6Plus ကနေလာတာနဲ့ iOS 9.1 ဗားရှင်းအသစ်ကြောင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်တာမှလွဲရင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိပါဘူး။
အိုင်ဖုန်းအသစ်များရှိကင်မရာနှစ်လုံးတိုးတက်လာသည်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာက 12 Mpx အထိတက်လာပြီး iPhone 6s Plus မှာတော့ Optim stabilizer ကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားတယ်။ အဲဒါကသူ့မှာမရှိသေးတဲ့ 6s တွေနဲ့ခွဲခြားထားတယ်။ လက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၊ ပြောင်းလဲမှုကိုသတိမပြုမိနိုင်ပါ။ iPhone6Plus နှင့် 6s Plus နှင့်အတူတူအလင်းရောင်အခြေအနေများတွင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ရှေ့ကင်မရာကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ။ လက်ရှိ5Mpx ဖြင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် selfies များသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးနှင့်အတူ။ Apple သည် Retina Flash ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် selfie ရိုက်ယူရန်နှင့် Flash ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်ကိုလင်းစေသည့်အလင်းရောင်နည်းစေသည့်ရလဒ်ကိုရရှိစေသည်။
ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် 4K ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းနှင့်အတူတိုးတက်သည်နှင့်၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်စဉ် 8 Mpx ၏ဓါတ်ပုံများကိုသင်ရိုက်နိုင်သည်။ FullHD ဗီဒီယိုကို 120 fps နှုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်းသည်လည်းအသစ်ပါဝင်သည်။ ကျန်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်တူညီသည်။
Live ဓါတ်ပုံများ၊ မင်းရဲ့ဖမ်းယူမှုတွေကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပါ
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာကာတွန်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်အခါအထူးပြုလုပ်စရာမလိုဘဲသင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူသည့်အခါတိုင်း 3D Touch မှသင်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည့်ဗီဒီယိုအပိုင်းအစငယ်တစ်ခုကိုအမှန်တကယ်မှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။ ဓာတ်ပုံသည်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကဲ့သို့မဆိုငြိမ်သက်နေလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နှိပ်သောအခါ၎င်းဗီဒီယိုနှင့်အသံအစီအစဉ်ငယ်ကိုစဖွင့ ်၍ စတင်လိမ့်မည်။ ဤဓာတ်ပုံများကို iOS9တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့်ကိရိယာနှင့်မဆိုမျှဝေနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုလည်းဖွင့်နိုင်သည်။
3D Touch, iOS9ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပြောင်းလဲမှုတစ်ခု
၎င်းသည်အိုင်ဖုန်းအသစ်များ၏အဓိကအသစ်ဖြစ်သည်။ သင်၏မျက်နှာပြင်သည်ယခင်မော်ဒယ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် သင်အပေါ်မှာဖိအားပေးမှုအဆင့်ကိုရှာဖွေနိုင်တယ်။ iPhone Touch ကို Apple က 3D Touch ဟုခေါ်ဝေါ်သော Force Touch အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြင့်သင်၏ကိရိယာနှင့်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုလုံးနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်စေသည်။ အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီး application ဖွင့်ပြီးအနည်းငယ်ထပ်နှိပ်ပါ။ သင်အသုံးအများဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ သင်သည် Twitter ပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံတစ်ခု တင်၍ အဆက်အသွယ်တစ်ခုကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏ Springboard မှစာတစ်စောင်ကိုတိုက်ရိုက်ရေးသားနိုင်သည်။
3D Touch သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွင်းတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။ စာတိုက်ပုံးမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုမည်သို့ကြည့်ရှုရမည်၊ ဖတ်ပါသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်မှတ်သားပါနှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကဝင်စရာမလိုဘဲ။ ဝက်ဘ်အကြောင်းအရာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများလည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သင် link ကိုအနည်းငယ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
developer များကဤနည်းပညာအသစ်အပေါ်အကြီးအကျယ်လောင်းနေကြသည် 3D Touch နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော App Store မှတတိယပါတီ application များရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စတင်ရုံထက်မကလုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်။ ဒီ 3D Touch က lock screen ပေါ်မှာနောက်ခံပုံအဖြစ်သင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ရုပ်ပုံ၏ကာတွန်းတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန် (သို့) multitasking နှင့်ယခင် application ကို start ခလုတ်ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
အတွင်းပိုင်းရှိ iPhone အသစ်များ၊ အပြင်ဘက်တွင်အတူတူဖြစ်သည်
ဤ iPhone အသစ်များတွင်ပါဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသည်လူတို့အတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အမြင်အာရုံတူညီခြင်းရှိသော်လည်းအခြားသူများအနေဖြင့်6သို့မဟုတ်6Plus ရှိလျှင်ပြောင်းလဲမှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ 6D Touch ၏ရောက်ရှိမှုသည် iOS တွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲကထိုက်တန်ရဲ့လား။ iPhone 6s နှင့်အစောပိုင်းမှလာသူများသည်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘက်ထရီ၊ ကင်မရာနှင့်အင်တာဖေ့စ်တို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများစွာကိုသေချာပေါက်သတိပြုမိကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ပစ္စည်းအသစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကုန်လွန်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်3သို့မဟုတ်5Plus ရှိသူများ အဲဒါဘာလဲ သူတို့ပစ္စည်းအသစ်တွေနဲ့သူတို့လုပ်နိုင်တာအသစ်တွေအရာအနည်းငယ်သာရှိပြီးအဟောင်းတွေနဲ့မလုပ်နိုင်တော့ဘူး.
ပိုမိုအားကောင်းသည့် A9 ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM 2GB
12K video recording နှင့်အတူ 5MP နှင့် 4MP ကင်မရာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
Features အသစ်များ - 3D Touch နှင့် Live Photos
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုမိုစိတ်ချရသော Touch ID
၎င်းကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သော်လည်း 4K ကိုမကစားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » iPhone 6s Plus အသစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုကိုမှတ်ချက်ပေးလိုပါကကျွန်ုပ်၏ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအားလုံးကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ iPhone 1 အချိန်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လူးဝစ်သည်လည်းသင်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်ကိုတွေ့ရသော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ သင်၏လက်ဗွေဖြင့်ဖွင့်သောအခါ iPhone ကိုအချိန်အတန်ကြာသော့ခတ်ပြီး ၁၀ စက္ကန့် (သို့) အနည်းငယ်ပိုပြောပါကအချိန်ကာလ၏အထက်ရှိဘားသည်ဘက်ထရီနှင့်အော်ပရေတာပျောက်ကွယ်သွားပြီးပြန်ပေါ်လာရန်အချိန်ယူရသည်။ ငါက Samsung ဖြစ်လို့လား၊ ငါ့ iPhone မှားနေလားဆိုတာက Chip ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ youtubers တွေဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်မြင်ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလဲ၊ Touch ID ကျရှုံးခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာသွားပြီး ၆ တွင်နှေးကွေးသွားသောအခါကျွန်ုပ်အဘ၏စစ်ဆေးချက်များအရဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ့ကိုရပြီ
ကျွန်ုပ်၏ 6s Plus သည် TSMC ဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်၊ သင်ပြောသည့်အတိုင်းမှန်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်နောင်တွင်မွမ်းမံမှုများတွင်တည့်မတ်ပေးမည့်ဆော့ဖ်ဝဲ bug ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါ့ကိုဖြေကြားခြင်းနှင့် hehe ၏ထိပ်ပေါ်မှာငါရှိကွောငျးကွောကျရှံ့ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်လူးဝစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ဒါဟာမသက်မသာမဟုတ်ပေမယ့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ screen ကိုရွှေ့ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူရပေမယ့် iOS 9.1 bug တွေလိုပြေလည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသတိထားမိတာကဘတ်ထရီကကားထဲကဓာတ်ဆီနဲ့တူတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါကံကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ထင်နှင့်ငါပြန်ပြောင်းလဲလျှင်ငါ့ကို TSMC ပေးပါ။ ငါ TSMC ကိုမထိခင် iPhone ပြောင်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ထိုက်တန်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂% ကနေ ၃% လောက်ဒီလောက်သိသာထင်ရှားမှုမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်၊ TSMC ရှိရင်သင်ဟာ Iphone2ထက်မြန်တာကိုသတိထားမိလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမင်းရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း။
ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိမယ်မထင်ဘူး ခြားနားချက်ကတကယ်တော့ ၆.၁ နဲ့လာလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ beta ကိုအလွန်ကောင်းသောဖြစ်ကြပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီအလွန်သိသာဖြစ်ကြသည်ကိုသင်ပြောင်းလဲမှုကိုသတိထားမိပုံကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
သင် 6s ကင်မရာသည်6ကင်မရာထက်မကောင်းသည်ဟုသင်ပြောခဲ့သည်မဟုတ်လော
iPhone 6s ကင်မရာသည် ၆ ပုံထက်ပိုကောင်းသည်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ6Mpx သည်တိုးတက်မှုကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရန်လုံလောက်သောပြောင်းလဲမှုမဟုတ်သော်လည်းအခြားဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တန်းတူဖြစ်ခြင်း 12Mx သည် 12Mpx ထက်ပိုကောင်းသည်မှာထင်ရှားသည်။
ကောင်းပြီ၊ ၄ င်းသည် 4k ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်ကြီးမားသောရှုံးနိမ့်သော်လည်း၎င်းကို ပြန်၍ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်ယင်း၏အကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းများစွာမရှိပါ။ ဒါက Apple ကိုင်တွယ်တဲ့စျေးနှုန်းတွေထက်နည်းနည်းလေးပါဘဲ၊ ကျွန်တော်က 4k အရည်အသွေးရှိတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုထည့်ထားမှာပါ။ LG G3 ကဲ့သို့သောခေတ်မမီတော့သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသည်၎င်း၏ပထမဆုံးဗားရှင်း မှစ၍ ကတည်းကရှိသည်။ ဘက်ထရီပြissueနာမှာလည်းအလားတူပဲ၊ လုံလောက်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ဘက်ထရီကို ၀ ယ်ယူဖို့ကြောက်ရွံ့နေပုံရပါတယ်။ လူကြီးလူကောင်းတွေ၊ နိမ့်နိူင်တဲ့စျေးကွက်မှာ 4000 mAh ရှိတဲ့ဆိပ်ကမ်းတွေရှိတယ်။ နို့, သင်သည်သူတို့ကိုင်တွယ်သောသူတို့အားစွမ်းရည်၏ shit နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုပါသနည်း ၂၇၅၀mAh iPhone 2750s Plus အတွက်ရယ်စရာကောင်းသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ဒါဆိုလူတွေညည်းညူတာဟာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်းအမြစ်များစားသုံးမှုသည်စီးပွားရေးနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသကဲ့သို့၎င်းစွမ်းဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုမစတင်မီဤထူးခြားချက်အားလုံးကိုသင်ပိုလေ့လာသင့်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စျေးကွက်တွင်မော်ဒယ်အနည်းငယ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်မယ့်အစားလျှော့ချလိုက်တာပဲ။ ငါဟာမီဒီယာတော်တော်များများမှာဖတ်ခဲ့တာဟာ "နေရာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကလျော့သွားတယ်" မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာ iPhone6Plus ဘက်ထရီ၏သုံးပိုင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမ်းပိုက်ထားသည့် ၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီများကိုကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာရရှိခဲ့သည်။ ငါ 3000G ကတည်းက iPhone ကိုသုံးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုံးဝနားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ ဈေးနှုန်းတွေအတိုင်းအတာမရှိဘဲမြင့်တက်နေတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့အိမ်ခြံမြေလောကမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ငါတို့ဟာဒီတာဝန်အတွက်တာဝန်ရှိသည် သူတို့တပ်ဆင်ထားသည်ဟုထင်ကြေးပူဖောင်း။
ဟယ်လိုငါ့ကို 3s ဝယ်ဖို့တန်ဖိုးရှိသို့မဟုတ်မရှိသည်သော iPhone 6s နှင့်ငါ့ iPhone 5s အကြားကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှု6ပေးပါ? အရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထရပ်ကားမောင်းသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ် reception ည့်ခံခြင်းနှင့် gps ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုကောင်းစွာဆောင်ယူရန်အရေးကြီးပါသည်